Sideen ku ogaadaa ololka mataanaha runti inay jiraan? - Mytika Speak
Bogga ugu weyn / Olol Mataano & Jacayl Rabaani ah / Sideen ku ogaadaa ololka mataanaha runti inay jiraan?
bilood ka hor 12
1 Min Akhri
Dadka badankood waxay dareemaan wax banaan oo dhexdooda ah, taas oo u ooman jacayl midaysan oo kaamil ah. Hilowgaas waxaa loo arki karaa inuu caddeyn u yahay jacaylka rabaani ah waa suurtagal.
Haddii qof si dhab ah u ogyahay taas dabka twin waa dhab, markaa olol mataano ah ayaa runti ka jira iyaga caalamka. Haddayna garanayn, markaa iyaga uma jiraan. Fahamkan ku saabsan sida shakhsiyaadka shaqadu u shaqeeyaan waxay ku habboon yihiin dhinac kasta oo nolosha qofka ka mid ah.
Jidadka oo dhan waan qaadaa,
dib kuugu noqo.
Tartan aan la arkin,
i tusi aragtidaada.
Had iyo jeer waan ogaa.
Waxay muujineysaa jacayl,
taasi waxay dareemeysaa run.
Tagsmiyirka koritaanka shakhsi ahaaneed gabayo ruux ahaaneed Labaatan Guul
Sideen ugu diyaargaroobi karaa la kulanka ololkayga mataanaha ah?
Sideen ku heli karaa ololkayga mataanaha ah?
Ma ololka mataanaha ah ma wada hadlaan ka hor kulanka?
Muxuu hal naf u doortaa inuu laba u kala jaro?
Ma olol mataano ah ayaa hadda dib u midoobaya inbadan?
Sideen ku joojiyaa inaan dareemo walaac dad badan?
Maxay dadku ugu xiran yihiin reincarnation?